Ulawulo Crypto Market ngo 2018 - Blockchain News
Iingcali zikholelwa ukuba 2018, sinokulindela ukuba oorhulumente uya kwandisa ulawulo phezu market ICO, Exchange cryptocurrency, kunye nabarhwebi. Ngaxeshanye, yeebhanki ezinkulu central zehlabathi aqonde cryptocurrency enokubakho-ingakumbi, bitcoin-yaye ukulungele ukuba yithenge kunyaka ozayo. Siye sahlolisisa koko iziyalezo indlela imizimba zemali ezahlukeneyo ngayo kwimarike crypto eya kubakho 2018.
amagunya kulo nyaka wemali kumazwe amaninzi anenkqubo ummiselo ICO waza wavakalisa isimo sabo sengqondo ngale ndlela ekutsaleni umdla wotyalo. ke, China kunye noMzantsi Korea ngokusesikweni lakuphelisa ICO ngomhla yemimandla yabo. Okuphikisanayo, eusa, Khanada, Swizalend, Japhan, Singapho , no U.A.E. kukhutshwa izigqibo eziliqela ezisebenisa ICO ngokusemthethweni, ne ICO uchanabeke ukulawulwa amagunya karhulumente. zeziliphu ukuze bawe phantsi kwemithetho ekhoyo, umzekelo, lowo olawula ukuthenga interfund. Ngokutsho ku Jerry brito, UMlawuli oLawulayo lombutho nzuzo Coin-Centre, oorhulumente liya kulandela umzekelo US kunye nokwandisa ulawulo ukuthengiswa oluphawu 2018. In the USA, ezinye iimpawu ezithile an ICO kuthathwa izibambiso kwaye ilawulwa phantsi kwemithetho efanelekileyo. Stephen Obie, neqabane at yabameli ngamazwe Usuku Jones, uveza ingcamango efanayo:
“Ndicinga nokucaca ngokuqinisekileyo uya kuza ngayo ngezenzo zokunyanzelisa kunye nezinye ukhokelo ukuba umzuzwana uya kuyinikela kwindawo yemarike tokenized. Umlawuli uyazi ngale emarikeni aze ngokuzimiseleyo.”
Iingcali zikholelwa ukuba izenzo ezifana ICO ziya kuthathwa malunga cryptocurrency, ukuthi ngqo, bitcoin. Dmitriy Zhulin, co-umsunguli INS Ecosystem, ehlala phezu kwalo mba:
“Njengoko Bitcoin ezinegalelo, ummiselo uya kuqala isakhelo ICOs uze sidlulela cryptocurrencies, kunjalo, kunzima ngoku ukuqikelela ukuba oku kuya kuba nemiphumo emihle okanye ezingalunganga kushishino. Nangona ukwanda kummiselo kwisithuba crypto, Ndikholelwa ukuba blockchain njenge kuza ingathinteleki ngummiselo enzima.”
Iintengiselwano Bitcoin sele zivaliwe kumazwe, ezifana Bolivia, Ekhuwado, Indiya , Bhangladeshi, Ayisilend, Khirgizstan, Morokho, Nephal, Maleyishiya, Indoneshiya, no Taiwan. Ngaxeshanye, China, apho akuvunyelwa ukuba kuthengiswa kwi Exchange cryptocurrency lendawo, naseRussia zilungiselela amatyala yommiselo cryptocurrency, nto leyo kuza ukusebenza 2018. EUnited States, bitcoin batyali-mali ziya kufuneka ingxelo inzuzo kwi-Revenue Service (IRS) uze uhlawule irhafu ngokungqinelana kwiSaziso 2014-21.
Ngo December 4, i-UK ne EU nabalawuli zemali ibhengeze malunga uceba Kwathi umthetho phantsi apho cryptocurrency abarhwebi kunye nabatyali, kwezinye iimeko, kuya kufuneka ukuba bachaze ulwazi zabo, kunye nokwabelana cryptocurrency kuya kufuneka unike amagunya kunye nokufikelela kulwazi umsebenzisi. Ngokutsho izidumbu zemali karhulumente, la manyathelo afanelekileyo ukukhusela umsebenzi imali-ngokungemthetho nezezimali ubunqolobi. Kudityaniso iindlela ezahlukeneyo, bebhekisa kulo mba ziza kugqitywa ekuqaleni 2018, kwaye kamasipala uya kuqalisa ukusebenza ekupheleni konyaka olandelayo.
iibhanki G7 engundoqo cryptocurrency
Wonke phawu lubonisa wezifundo ezingummiselo kwemarike crypto ngabasemagunyeni zemali kumazwe ahlukeneyo. nabalawuli, kunjalo, ubona ikhono cryptocurrency ngokunjalo. in 2018, iiBhanki ezingoovimba G7 ziya kuqala ukuthenga cryptocurrencies sokuxhasa oovimba zabo kwamanye amazwe. A Izinto zatshintsha ngenxa iiBhanki ezingoovimba G7 iya kuba xa capitalisation kwimarike bitcoin lidlula ixabiso lonke SDR (amalungelo umzobo ekhethekile). Kuyinto-asethi reserve ngamazwe wadala yi-International Monetary Fund (IMF) ukongeza amazwe angamalungu alo’ namafa esemthethweni. zeemali Bitcoin, umzekelo, sele udlule ixabiso SDR (malunga $291 billion).
Enye wumbe kwelinqaku kuba baqonda ukuba amaxabiso iimali G7 ukuba iphelelwa nxamnye cryptocurrencies. in 2018, siya ubungqina bitcoin kunye nezinye cryptocurrencies abe iimali kakhulu ngamazwe capitalisation kwimarike, Ngokutsho kweengcali.
currency digital National
Ngokudala ezimalini digital kazwelonke, amazwe amaninzi bade uceba ukuguqulela iimali zabo wesizwe ukuba blockchain. uJim Angleton, UMongameli yiAegis FinServ Corp, liqinisekile ukuba inani kumazwe ezivelisa nemali kuya kukhula kuphela:
“Siyazi ukuba kule mihla 108 amazwe bazama kokukhupha nemali digital egameni zokuphelisa imali zabo zephepha kunye nokuphuma ukuxhomekeka phezu U $ D. Siyakholwa 20+ Amazwe liya kuqalisa Beta Testing ngayo iinjongo zabo.”
October Last, safika ukwazi ukuba iRussia uza kufumana imali yayo kazwelonke digital, cryptoruble. Lo rhulumente uza kulawula phezu nokukhutshwa nokujikelezisa cryptoruble baseRashiya, nokuba nzima imigodi cryptocurrency. kwakhona, Venezuela uMongameli Nicolas khong wakhupha umyalelo, ekuthe ngenxa yawo kwahlaziywa bekusungulwa cryptocurrency kazwelonke El Petro Kucetywa ukuba kulo nyaka ozayo. babelawula ezemvelo Venezuela, ezifana negolide, namafutha, nedayimane, wayeza El Petro.
Le ICO kunye crypto zorhwebo umlomo ngokusesikweni China, kodwa yaba lilizwe lokuqala ukuba va kwase yedijithali le lwemali kazwelonke. xue Ju, intloko Digital Currency ISebe loPhando kwi-Peoples Bank of China, yathi umlawuli mali kufuneka akhuphe cryptocurrency lesizwe eziya kuba ithenda osemthethweni ngokukhawuleza kangangoko kunokwenzeka.
NgoDisemba neebhanki engundoqo ye-United Arab Emirates kunye Saudi Arabia lasungula iphulo elilingwayo iintlawulo cross-komda. Ukubandakanyeka kwe engundoqo yebhanki Saudi Arabia i-ubonakala, siyanikezelwa ukuba phambi kwakungekho ngxelo ezisemthethweni malunga cryptocurrency, market crypto, okanye blockchain yi nabalawuli yemali yelizwe. I U.A.E., ngethuba lawo, liphuhlisa inani leeprojekthi blockchain kwicandelo labucala kunye noluntu, kunye Global Blockchain Council of Dubai olawula abaninzi kubo.
WokuLawula Crypto Market